Fiahiana ara-tsosialy: Hiara-hiasa ny Fondation Akbaraly sy ny ONG La Vita Per Te ary ny Minisiteran’ny mponina
vendredi, 20 septembre 2019 15:27
Nisy ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny mponina, tamin’ny alalan’ny minisitra NAHARIMAMY Lucien Irmah sy ny filohan’ny Fondation Akbaraly, no sady filoha mpanatanteraka ny ONG La vita per te Dr Francesco Cimino. Haharitra 5 taona ny fifanarahana.
Ho an’ny ankizy kamboty sy marefo, ireo manana ray aman-dreny voatana any amin’ny fonja, ireo iharan’ny herisetra ara-pananahana, tanora mania, fianakaviana tsy manan-kialofana, vehivavy iharan’ny herisetra, vehivavy mitondra vohoka sy mampinono, be antitra, olona voahilika amin’ny fiaraha-monina, manana fahasembanana, ankizivavy lohan’ny fianakaviana, ny tetikasa. Ary miompana indrindra amin’ny fanampiana ny zaza kamboty, mirenireny, tsy misy mpiahy, fanatsarana ny fari-piainan’ny ankizy, ary indrindra fampahafantarana ny zon’ny ankizy ny fanampiana izay hataon’ny Fondation Akbaraly.
Tonga nanotrona ny fifanaovan-tsonia izao Ramatoa LYZ, mpanao hazakazaka lavitr’ezaka Kanadianina. Tonga eto Madagasikara izy hiara-miasa amin’ny Fondation Akbaraly. Hikarakara hetsika ara-panatanjahantena hazakazaka any Antsiranana izy, ka hanangonana vola hanatsarana ny fiainan’ny ankizy. Noho ny tahan’ny ankizy iharan’ny herisetra ambony any Nosy Be Hell Ville dia nanentana an-dRamatoa LYZ ny minisitry ny mponina Naharimamy Lucien Irmah mba ho tonga hijery ny zava-misy any an-toerana.
Vinavinan’ny Minisitera ny hanangana HLM (habitat à loyer modéré) mba tsy hisy intsony ireo tsy manan-kialofana ary efa nametraka kontenera tao La Réunion kely ny Minisitera mba tsy hatorian’ireo olona ao anaty sachet intsony. Nanainga ny Fondation sy ny ONG izy mba hanampy amin’izany.
Nanasa ny Minisitra Naharimamy Lucien Irmah i Dr Francesco avy amin’ny Fondation Akbaraly mba hitsidika ny Centre d’Accueil any Fianarantsoa, izay mikarakara ny ankizy mirenireny sy kamboty.
Nanao antso avo ramatoa Minisitra ny hifanomezan-tànana an’ireo tsara sitrapo amin’ny fiahiana ireo olona marefo.